Taliska AFRICOM oo duqeyn ka fuliyay Gobalka Bakool | KEYDMEDIA ONLINE
BAKOOL, Soomaaliya - Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in xalay xilli dambe ay maqlayeen dhawaqa hubka culus ee duqeeynta diyaaradaha ay ka sameeynayeen faarisimaha Al-shabaab.
Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa hal weerar ka fuliyay nawaaxiga Tiyeeglow, Soomaaliya, Janaayo 18, 2021. Qiimeyntii ugu horreysay waxay muujineysaa in duqeynta ay ku burburtay hal xarun oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab. "Qiimeynta hore ee taliska ayaa ah in qof rayid ah uusan ku dhaawacmin ama ku dhiman hawlgalkan" ayaa lagu yiri warbixinta oo kasoo baxday xafiiska AFRICOM ee Soomaaliya
Duqeeyntan oo ay fuliyeen diyaaradaha Taliska AFRICOM ee mareykanka ayaa lagu sheegay in la bartilmaameedsaday fariisin kooxda Al-Shabaab ee deegaankaasi. “Al-Shabaab waxay Soomaaliya ka fulisay weeraro ismiidaamin iyo argagax leh oo ay ku jiraan weerarkii ugu dambeeyay ee lagu bartilmaameedsaday hoggaanka Danab iyo sidoo kale ololeyaal qaraxyo oo dhowaan ay ku barakaceen kumanaan rayid Soomaaliyeed. Waxaan sii wadi doonnaa taageerida saaxiibadeena iyo carqaladeynta dadaallada Al-Shabaab, ”ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Cirka ee Mareykanka Maj. Gen. Dagvin Anderson.
Deeganada gobalka Bakool ayaa waxaa muddo 10-sano ka badan go'doono dhinacyo badan ah saaray Al-shabaab, iyadoo ay shacabka Magaalooyinka waaweyn ee Gobalka Bakool ay ka jirto xaaladoo nolol dari ah.
Inta badan weerarada ay fuliyaan diyaaradaha Mareykanka ayaa waxaa lagu beegsadaa kooxda Al-Shabaab iyadoo ay dhibaato xooggani kasoo gaarto dadka rayidka ah ee beeraleyda u badan kuwaasoo duqeymo hore lagu dilay.